तेस्रो आँखा विशेष – Tesro Ankha
तेस्रो आँखा संवाददाता समाचारमा मेरो नाममा नजोडिदिनुहोला । म पनि राजनीति गर्ने मानिस । समाचारमा मेरो नाम जोडिए मेरै आफन्तले भोलि भोज खानेछन् : दिनेश राई हलेसी (खोटाङ) मंसिर किरात राई समुदायको आदिम तथा ऐतिहासिक ठाउँ तुवाचुङलाई व्यक्तिविशेषले कमाइखाने भाँडो बनाएको भन्दै एकपछि अर्को अनियमितताको पर्दाफास भएको छ । स्थापनाकालदेखि तुवाचुङ जायजुम संरक्षण समिति महासचिव रहेका दिनेश राई (हलेसी, ऐंस...
तेस्रो आँखा संवाददाता खिदिमा (खोटाङ) १४ मंसिर निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै काँग्रेस महासमिति सदस्य सुवास पोखरेल साबिक खिदिमा–६ ढाँडे खोटाङमा लखेटिएका छन् । साबिक खिदिमा–६ ढाँडेका लक्ष्मण तामाङको घरबाट गएको मंसिर १२ गते महासमिति सदस्य पोखरेल, खोटाङ क्षेत्र नम्बर २ काँग्रेस क्षेत्रीय सभापति तीर्थ भट्टराईलगायत काँग्रेस नेता राति ८ः३० बजे लखेटिएका हुन् । नेता पोखरेल र भट्टराईसँ...
नवीन चाम्लिङ राई/कृष्ण कृति गाउँघरमा सय वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धा भेट्न कठिन छ । चामलमा बियाँ भेटेसरह भेटिने ज्येष्ठ नागरिक नयाँ पुस्ताका लागि आशिष हुन् । वरदान हुन् । इतिहास हुन् । सानोतिनो पुस्तकालय नै हुन् । ज्ञान–सीपका खानी हुन् । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थान गैरीगुठमा त्यस्तै जीवित इतिहास भेटिएका छन् । सय वर्ष पुगेका इतिहास हुन्– हस्तबहादुर राई । जिउँदो इतिहाससँग साक्षात्कार गर्न पं...
दीपेन्द्र राई गनिल्याउँदा काठमाडौं पसेको १७ वर्ष भएछ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ गैरीगुठ खोटाङनिवासी सुवास राई, अर्पण राई भनेर पनि परिचित छन् । राईलाई दुवै नाम प्यारो लाग्छ । ‘बिजेनसम्यान’ बन्ने एकझोला सपना बोकेर संवत् २०५९ चैतमा काठमाडौं पसेका उनी ‘बिजनेसम्यान’ नबने पनि अहिले जुन क्षेत्रमा रमाइरहेका छन्, त्यसमा दुःखी छैनन् । सन्तुष्ट छन् । सन्तोषभन्दा ठूलो सम्पत्ति अरू के होला ? सिक्दै सिका...
नवीन चाम्लिङ राई खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेलबाट नौ किलोमिटर दूरीमा रहेको भुलभुले दूधकुण्ड देउधामको मनमोहकता शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन छ । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भुलभुले जंगलबीचमा रहेको छ । त्यही माथि रुवालुङ झरनाले भुलभुल पुगेकाको सारा दुःख, पीर, व्यथा भुलाइदिन्छ । मनै शान्त पार्ने भुलभुले देउधाममा पछिल्लो समय दर्शनाथीको भीडभाड लाग्ने गर्छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागडी नगरपालिका–६ नेर्पाको ...
असल चरित्र बसीबसी पनि काम गरिन्छ र ? गरिहालिन्छ नि । होइन भने हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–८, गाराबु धितुङका चामबहादुर सार्कीलाई भेट्नु त । शिल्पी समुदायका सार्कीले हिजोआज बसीबसी काम गर्छन् । बसेर गरिने कामबाट चित्तबुझ्दो कमाइ गरेका छन् । ५८ हिउँद बर्खा झेलेका उनी हिजोआज हलेसी गुफादेखि बसाहा गुफा झर्ने सिँढीछेउको छाप्रोमा बसेर जुत्ता, चप्पल सिलाउँछन् । जुत्ता चम्काउँछन् । जुत्ताको सोल हाल्छन्...
तेस्रो आँखा संवाददाता रङ्काडो (दुर्छिम), २ मंसिर मह बनाउँछ माहुरीले, आफू खान पाउँदैन धन सञ्चित गर्छ मान्छेले, मर्दा लान पाउँदैन भन्न त यसो भनिन्छ नि । तर, यसो भन्नेहरूले नै मौका पाए धन कुम्ल्याउन के पछि पर्थे होलान् र । यसमा द्विविधा रहेन । सुनमा त ठिकै होला तर नुनमा समेत अनियमितता गर्नु भनेको गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फाल्नुसरह हो भन्नेको कमी छैन । हो, त्यस्तै भएको रहेछ– माइती चेली ग...